Akụkọ - Eziokwu gbasara tebụl kọfị na ihe kpatara ị ji chọọ otu
Anyị na-na na na-na-na-ajụjụ, na otu n’ime anyị kasị nkịtị bụ ma ị chọrọ a tebụl kọfị. Jụọ ọ bụla n'ime ime mmebe na ha ga-agwa gị, ọrụ trumps etolite ọ bụla ikpe. Gini mere iji mepụta ime ụlọ mara mma ma ọ bụrụ na ị gaghị eji ya eme ihe? Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa igosipụta otu ị ga-esi jiri oghere tupu ịmalite ịzụ ahịa. Maka ime ụlọ gị, o yikarịrị ka ị ga-ekiri telivishọn, ịnabata ndị enyi, ma soro ezinụlọ gị na-atụrụ ndụ. Ọ bụ ime ụlọ chọrọ ka ọ dịrị gị mma.
Tinye tebụl kọfị. Mgbe ị nọdụsịrị ala, ọ bụ ihe kachasị mkpa n'ime ime ụlọ gị n'ihi na ọ na-a drinksụ ihe ọ drinksụ drinksụ, ebe dịpụrụ adịpụ gị, akwụkwọ ọgụgụ, ọ bụkwa ebe ị ga-efopụ ụkwụ gị. Ime ụlọ ọ bụla chọrọ otu, anyị abịakwala ijegharị gị site n'ihe ị kwesịrị ịtụle tupu ịhọrọ nke.
1. Kọfị Isiokwu Nha
Tebụl kọfị gị kwesịrị ịdị n’agbata 14-18 sentimita site na ebe ọ bụla jikọtara ya gburugburu, ma karịa ihe karịrị sentimita iri abụọ na anọ. Ya mere ọ bụrụ na ị tọrọ gị floorplan, ị kwesịrị ị na-enwe ike ịhụ otú nnukwu a kọfị table ị ga-mkpa.
Maka nnukwu ọnụ ụlọ obibi, tụlee iji tebụl kọfị abụọ n'akụkụ ibe gị. Ma ọ bụ ọ bụrụ na ime ụlọ gị abụghị ebe ị gafere, ị nwere ike ịga karịa.
2. Tụlee Ọdịdị
Oghere dị iche iche na nhazi dị iche iche na-akpọ maka ụdị dị iche iche, mana nke a bụ ihe ị ga-echebara echiche. Maka nhazi nke emechiri emechi, akụkụ anọ ma ọ bụ akụkụ anọ nwere ọrụ zuru oke.
Ọ bụrụ na ọnụ ụlọ gị bụ njem gafere, na ị ga na-agagharị na tebụl kọfị, gburugburu na-arụ ọrụ nke ọma.
Aesthetically, anyị na-amasị itule gburugburu na square shapes na a ohere, ma ọ bụrụ na ọtụtụ n'ime gị ngwá ụlọ iberibe bụ square (eche a sofa na tuxedo ogwe aka, square ekwú ọkụ, na square n'akụkụ tebụl), a gburugburu kọfị table na-agbakwunye itule. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị nwere ogwe aka dị na arịa gị, nnukwu enyo gburugburu, na tebụl ndị gbara ya gburugburu, okpokoro akụkụ anọ ma ọ bụ akụkụ anọ na-arụ ọrụ mara mma. Ihe niile gbasara itule.
3. Mechaa Ime ụlọ ahụ
Ọ dịghị ụlọ kwesịrị iji otu imecha ahụ na ihu ọ bụla, yabụ dịka ọ dị na ọdịdị, tebụl kọfị nwere ike ịbụ ụzọ isi weta ihe ọhụrụ n'ime oghere gị. Ọ bụrụ na ị nwere akwa nubby na akwa gị ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-adọrọ adọrọ, tebụl kọfị na-egbuke egbuke ma ọ bụ na-egbuke egbuke ga-adị iche na ụdị adịghị ike. Ma ọ bụ ọ bụrụ na ị ga-eji ime ụlọ gị na-ekiri TV, họrọ ngwụcha nke ị na-agaghị eche itinye ụkwụ gị, dị ka osisi dị ntakịrị ma ọ bụ ottoman a na-ekpuchi ekpuchi.
4. Styling Kọfị Tebụl gị
Ozugbo ị họpụtara tebụl kọfị gị, tụlee ngwa. Maka ụlọ ezinụlọ ebe ị na-ekiri TV, ikekwe ị ga-achọ ịhapụ ọtụtụ ohere maka ịkwado ụkwụ na ị plaụ mmanya. Tebụl okpokoro nwere shelf dị ala na-arụ ọrụ dị ukwuu na oghere ndị a n'ihi na ị nwere ike idowe akwụkwọ na trays dị n'okpuru, na-ahapụ ọtụtụ ụlọ n'elu.
Debe ngwa niile dị ala, ebe ị chọrọ inwe ike ihu n'elu ha. Ihe ọ bụla toro ogologo ga-egbochi usoro ọhụụ gị.
Tinye ihe ndị dị mkpa: ihe ọgụgụ, igbe anụ ahụ, ụsọ mmiri, igbe maka ime, kandụl, akwụkwọ egwuregwu, ma ọ bụ ihe ọ bụla ị ga-eji eme ihe ugboro ugboro nwere ike igosipụta.
5. Ottomans na Clyọkọ
Ugbu a, ọ bụghị ime ụlọ ọ bụla ga-enwerịrị "tebụl kọfị" - na okwu ndị ọzọ, ịnwere ike iji ottoman, pouf, ma ọ bụ ụyọkọ nke tebụl dị obere n'akụkụ ụfọdụ. Ihe dị mkpa bụ na ịnwere ihe dị na oghere a maka ịrụ ọrụ - ottoman, tebụl abụọ ma ọ bụ atọ dị n'otu, ma ọ bụ tebụl mmanya dị ogologo nwere ike ịrụ ọrụ dabere na otu ị ga-esi jiri ebe obibi gị.
6. Kọfị Kọfị na Nkebi
Ọ bụrụ na ị nwere ngalaba, ị nwere ike ịbịaru okpokoro kọfị gị dị iche. Ọtụtụ ngalaba nwere chaise na otu ma ọ bụ abụọ nsọtụ, yabụ na ị gaghị etinye ụkwụ gị na tebụl kọfị. Nke a na - enye gị ohere iji tebụl ma ọ bụ tebụl ọla. I nwekwara ike ịga obere obere ebe a n'ihi na ha agaghị adịkarị obere ụkwụ ma ọ bụ atọ ọchị.